New Oromo Drama: Qawwee Koo! -
2 thoughts on “New Oromo Drama: Qawwee Koo!”
DURAAN:DURSEE HUNDII KESSENUU GALATOMAA’
ADDE LELISE WANTAA’ TOKOO KANN SEGORSU QAWWE AKKATII ETINFEYEDEMEN BEREDUU GAFFA REKOTIFF SETAA’ ANII HADAA MENAA KOO MENNA FINCHANI: KESATEN BERSISE GAFAA DURAA FINCHANIF OUUDAN FULERET FECHEE GAFFA LAMATTA HOMAA:HINJEENA YERRO AMMA ODOO WANTI TOKO ODOO KESSA SHOKOKSE ESHIN QAWE BUTETE ANNA HINEGDUU WUAA HUNDUMAFU ABAA MENA’ KEE KABAJUNN GARIDHA,,,ETIFUFA.
yaadi fi gorsi kee gaariidha, yaa taú malee ijoon dubbii draamaa tanaa Adde laliseen qawweetti fayyadamuuf beekuu ykn wallaaluu ishii miti. Wanti darbuu barbaadame odeessitoota afaanii yookin gootota afanii warren shokoksa bineensaallee sodaatanii qawwee gatanii if irratti albaánii fi bakka namaatti immoo afaaniin ajjeessaa taánidha.
Oromoonis akka walii galaatti waan afaaniin dubbatu hojiitti hiikuu akka qabuu fi afaanumaan gadi bahanii bookkisuun faayidaa akka hinqabnee fi dhiirummaas akka hin taane ibsuufidha natti fakkaata.
yeroo heeddu warri afaaniin bookisan bakka dhirummaatti immoo dheessanii akka miliqan ykn bakka duuti jirtu qawwee qabatanii deemuuf dhiirmmaa isaa akka hin qabne mul’ísa.